Anti-Terrorism Shooter 2.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Anti-Terrorism Shooter
Anti-Terrorism Shooter ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဟယ်လို! ဂိမ်းပရိတ်သတ်တွေရိုက်ကူး FPS ။ ဒီအကောင်းဆုံးပထမဆုံးလူတစ်ဦးသေနတ်သမား join မှကြိုဆိုပါ၏!
ဒါကရှေ့-line ကိုအရေးယူစစ်ပွဲဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သူရဲကောင်းစစ်သည်တော်အဖြစ်, ရှေ့တိုက်ခိုက်ရေးဇုန်အတွက်, ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာရန်သူအမျိုးမျိုးကိုသတ်ပစ်စက်သေနတ်, သေနတ်များနှင့်စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်နှင့်အခြားခေတ်မီတိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်တွေသုံးပါ။ အားလုံးရန်သူများကိုသတ်ပစ်ရန်သင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိုက်ပွဲများကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ!
သင်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားစစ်ရေးစစ်မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့်နည်းဗျူဟာအသင်းနှင့်ခေတ်သစ်စစ်ပွဲတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ သငျသညျစက်သေနတ်, လက်ဖြောင့်ရိုင်ဖယ်နှင့်လက်ပစ်ဗုံးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း, သင်ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆီးတားသောဘေးဥပဒ်တပ်ဖွဲ့များပပျောက်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်အလုပ်တခုကိုပြီးမြောက်ရန်ဒီပစ်ခတ်မှုဂိမ်းထဲမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့သေနတ်ကောက်နှင့်ဤစစ်တိုက်ရာတွင်အများဆုံးသတ္တိစစ်သည်တော်ဖြစ်လာဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
တိကျမှု, ရည်ရွယ်ပတျဝနျးကငျြအကြမ်းဖက်သမားများ၏, ပိုမိုတိကျမှန်ကန်ဖျက်သိမ်းရေးရိုက်ကူး။ သူတို့ကအာဏာသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာလူရမ်းကားဖြစ်ကြသည်။ , အသည်းအသန်အကြမ်းဖက်သမားတွေနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းကြင်နာမှုအရှုံးမပေးနှင့်ရိုက်ကူးဖို့ကွိုးစားရန်အဆင်သင့်။ သငျသညျပိုကောင်းအကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းစေရန်အလို့ငှာ, သင့်တပ်များသင်တို့အဘို့အဆင့်မြင့်လက်နက်များအများကြီးပြင်ဆင်ကြ၏။ သငျသညျဝှက်ထားသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရှာဖွေဖျက်ဆီးခြင်း, ရန်သူရဲ့ပိုင်နက်ကိုထိုးဖောက်, ရှိသမျှကိုသင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသ, ကာ Front-line ကိုကွန်မန်ဒိုများမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်များရှိသည်။
- အကောင်းဆုံး FPS ဂိမ်း
Anti-Terrorism Shooter အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Anti-Terrorism Shooter အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Anti-Terrorism Shooter အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Anti-Terrorism Shooter အား အခ်က္ျပပါ
leonleo098store စတိုး 132 275.5k
Anti-Terrorism Shooter ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Anti-Terrorism Shooter အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.5
ထုတ်လုပ်သူ FIRE GAME
App Name: Anti-Terrorism Shooter
Release date: 2019-08-13 08:45:05
လက်မှတ် SHA1: 22:76:57:A2:36:11:2C:39:F3:74:91:26:14:5F:D0:78:92:96:9B:65
Anti-Terrorism Shooter APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ